(Dhagayso) Wasaaradda caafimaadka Puntland oo sheegtay kororka Viruska HIV/AIDS inuu ku badanyahay gobolka Mudug. – Radio Daljir
Oktoobar 29, 2012 12:47 g 0
Galkacyo, Oct, 29 – Wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr Cali C/llaahi Warsame oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in baaritaano la sameeyay lagu ogaado in cudurka HIV/AIDS uu si xawli ah ugu tarmayo gobolka Mudug.
Wasiirka ayaa hadalkaan ka jeediyay shirjaraa?id oo uu ku qabtay magaalada Gaalkacyo, waxaana uu hadalkiisa raaciyay arrintaan inay ku ogaadeen baaritaano ay ka sameeyeen gobollada Puntland.
Dr Cali C/llaahi Warsame, waxaa uu sabab uga dhigay kororka Viruska AIDS-ka kooxaha burcad-badeeda Soomaalida oo ku xooggan magaalada Gaalkacyo, waxaana uu bulshada ugu baaqay inay ka foog-jignaadaan khatarka cudurkaasi.
HALKAAN KA DHAGAYSO CODKII WASIIRKA CAAFIMAADKA PUNTLAND DR CALI C/LLAAHI WARSAME.